“Dalka Waxaan U Imid Waxaan Dareemay In Inta Aan Xooga Ahay Aan Dalka Wax Badan Ku Biirin Karo, Siyaasadda Dalkuna Ubaahan Tahay Jiil Cusub.Intii Aan Sugi Lahaa Markaan Hawl Gabo”Musharax Jamaal Cali Xuseen | Berberatoday.com
“Dalka Waxaan U Imid Waxaan Dareemay In Inta Aan Xooga Ahay Aan Dalka Wax Badan Ku Biirin Karo, Siyaasadda Dalkuna Ubaahan Tahay Jiil Cusub.Intii Aan Sugi Lahaa Markaan Hawl Gabo”Musharax Jamaal Cali Xuseen
Shantii sanadood Ee u danbeeyey Ee aan dalka u Soo guuray si aan siyaasadda Ugu biiro si toos Ah, inkastoo 20 sanadoodba aan si dadban Ugu jiray, wax badan baan bartay. Dalka waxaan u imid waxaan dareemay in inta aan xooga ahay aan dalka wax badan Ku biirin karo, siyaasadda dalkuna u baahan tahay jiil cusub. Intii aan sugi lahaa marka aan hawl gabo, waxaan is idhi intaad Weli xoogga tahay dalka u shaqee Oo dantaadii gaar ahaaneyd jooji. Taasi waxay dhiirigelin u tahay dhalinyaradda wax bartay Ee siyaasiyiintu qori isku dhiibka Ku dul maamulayso Ee aan fursada la siinaynin. Oo weliba ay u raacdo in madax looga dhigo qaar badan Oo ay dhalinyaradu ka sareyso. Dhalinyarada waxaan ku dhiiri gelinayaa in ay iyagu wax doontaan Oo ay Han yeeshaan, sI dalkan uu isbedel dhab ahi uga suurto galo. Odoyaashu waxay inoo noqon doonaan nus danbeedka inaguna xooggii baynu nahayoo, dalka inaynu xawaare cusub iyo Jiiho cusub Ku kaxayno ayaa u taalla ruux kasta Oo dhalinyaro ah. Haddii aynaan faraha la gelina cidina hadiyad inagu siin mayso. Imika waxyaalahii aan kala kulmay siyaasada iyo waxaan ogaadayba way i sii dhiiri geliyeen, waxaanan runtii culays masuuliyadeed dareemaa markaan arko da, yarta faraha badan Ee iskuulada Ka Soo baxay iyo shaqo la,aanta baahsan Ee dalka ka jirta. Ilaahay kheyrka hayna garansiiyo.
W/Q Musharax Aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen